न कुनै रोग न खाने लत तरपनि तौल ३ सय ३० केजी, कसरी ? | Ratopati
उमर दराज नंगियाना /बीबीसी
नूर अल हसन सुतेर खाना खान्छन् किनभने बसेर खाने कोसिसमा उनको हात टेबलसम्म पुग्न सक्दैनँ र बीचमा पेट आउँछ ।
लाहौरको अस्पताल कसरी पुगे ?
नूर अल हसनका अनुसार उनले मद्दतका लागि धेरैलाई गुहारे तर कसैले सहयोग गरेनन् । दुई वर्षअघि उनले लाहौरको एक डाक्टरसँग कुराकानी गर्दा शल्यक्रिया र उपचारमा १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुनसक्ने बताएको जानकारी दिए । आफूसँग त्यति धेरै पैसा नभएका कारण उनी चुप लागेको बसेको बताए ।
एक वर्षअघि जब उनीबारे समाचार प्रकाशित भयो तब लाहौरका चर्चित लेप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर माज अल हसनलाई उनीबारे धेरै जानकारी प्राप्त भयो । डाक्टर माजले उनलाई सम्पर्क गरे र निःशुल्क उपचार गराउने आश्वासन दिलाए ।
बीबीसीसँगको कुराकानीमा डाक्टर माज उल हसनले उपचारका लागि उनले ६ महिना अघिदेखि नूर उल हसनलाई प्रोटिन खुवाउन सुरु गरेको जानकारी दिए ।
‘यसअघि उनको तौल ३ सय ६० किलो थियो तर समस्याको कुरा के थियो भने उनलाई लाहौर कसरी ल्याउने ?’
सादिकाबादबाट लाहौर पुग्न बसमा आठदेखि ९ घण्टा लाग्छ । यस्तोमा खतरा यो थियो कि यति धेरै तौल भएका मानिसको रगत जम्न सक्थ्यो । त्यसकारण उनलाई हवाई एम्बुलेन्समा ल्याइयो ।
नूर अल हसनले सोसल मिडियामा आफ्नो भिडियो साझा गरेर मानिसहरुसँग मद्दत पनि मागेका थिए । अन्त्यमा उनलाई पाकिस्तानी सेनाको हेलिकोप्टरले लाहौर पुर्यायो ।
डाक्टर माजका अनुसार पाकिस्तानमा मोटोपनाका बिरामीलाई एयर एम्बुलेन्सबाट ल्याइएको यो पहिलो घटना हो ।
डाक्टर माजका अनुसार जब नूल अल हसनलाई अस्पताल ल्याइयो तब उनका सबै महत्वपूर्ण अंगले सामान्य रुपमा काम गरिरहेको थियो । उनलाई विशेषज्ञ डाकटरको निगरानीमा राखिएको थियो ।
‘जबसम्म म दुई सय प्रतिशत सन्तुष्ट हुन्नँ तबसम्म म अपरेशन थिएटरभित्र जादिनँ ।’
तीन सय बढी तौल भएका जुन व्यक्तिको उनले यसअघि शल्यक्रिया गरेका थिए, उनीहरु सबै जवान भएको उनले बताए ।
‘पाकिस्तानमा यस्तो प्रकारको यो पहिलो शल्यक्रिया हो ।’